U-Esteban González Pons, umbhali we-Ellas. Udliwanondlebe | Uncwadi lwangoku
Ukufota: U-Esteban González Iiponi. Iprofayile ye-Twitter.
Ewe Iiponi zika-Esteban González Uyaziwa kakhulu ngomsebenzi wakhe wezopolitiko, kodwa kukwicala lakhe loncwadi apho athi waziva ekhululekile. Inoveli yakhe yokuqala ngu Bona, apho iphuma khona ihhuku nge ibali lothando. Ufuna enkosi kakhulu ixesha lakho kunye nobubele bakho obukhulu ekundiboneleleni olu dliwanondlebe apho asixelela khona ngakumbi malunga nala maculo kunye nokusondelelana ngakumbi.
IIPONI ZE-ESTEBAN GONZÁLEZ -UDLIWANO-NDLEBE
IINCWADI ZONCWADI: Inoveli yakho isixelela ntoni, Bona, kwaye kutheni ibali lothando?
IIPONO ZE-ESTEBAN GONZÁLEZ: Bona bala libe linye ibali lothando phakathi kwentombazana nenkwenkwe ezelwe kwiminyaka yama-60 inoveli yokuvelisa, malunga abo bethu bazalwa xa uFranco wayesaphila okanye wayesandula kusweleka, Ulutsha loTshintsho. Ibali lisetiwe, ngokuyinxenye, kwi Valencia yeCopa América, eso sixeko esikhanyayo sahleka, naseValencia emva kwengxaki yezitena, ngokuyinxenye. Izixeko ezibini eziphikisanayo zikwindawo enye emephini.
I-EGP: Incwadi yam yokuqala yayi Igciwane Bug nguPoe, kuhlelo lolutsha. Nangona kufuneka ndikhankanye ingqokelela yamanoveli adluliselwe kwi-comic, ebizwa Ubucwebe boNcwadi loLutsha, kunye nenxalenye elungileyo yeenoveli zobuchwephesha zenkulungwane ye-XNUMX zabekwa ekuphakameni kwam njengomntu ofikisayo, ukusuka Ivanhoe phezulu UMiguel Strogoff o ISandokan, umzekelo. Ndisavuya xa ndibakhumbula.
Ngaphambi koko, iincwadi zokuqala endizifundileyo, bezingezizo ezam, kodwa kwimali mboleko evela kumalume wam uGuillermo, yayingama-albhamu IMortadelo kunye neFayilemon. Kuba Ndiyakhusela ukuba banike iNkosazana yeAsturias yezobuGcisa kuF. Ibañez, kuba ndiqinisekile ukuba ibhaso likaNobel elilandelayo kuluncwadi lwaseSpain luya kufundwa ebuntwaneni eMortadelo naseFayilemon.
Ndibhala okoko ndikhumbulayo. Ekuqaleni, Amabali oyikisayo ifuthe lePoe kunye namabali eMfazwe ye-Independence elinganisa uthotho lokuqala lwe- Iziqendu zeLizwe kunye nebhayiloji Napoleon NguEmil Ludwig. Ke amantombazana aba sisifundo sam sodwa kwaye ndaqala ukubhala imibongo emibi kakhulu.
I-EGP: Xa uqala ukufunda zonke iincwadi zikubethe. Eyona nto indithathele ingqalelo kakhulu njengendoda eselula INkosi yamasongo, iminyaka emininzi ngaphambi kokuba iimovie zimenze adume ngokugqithileyo. Iyandikhathaza xa i-cinema ibela iincwadi endizithandayo kwaye yazisa ngesiqwenga sayo ngokungathi inokuzahlula kuncwadi lwayo. UTolkien wayendiphethe kakuhle kangangokuba wabhala Imibongo "elvish" yamantombazana, kwaye akafuni ukuba yintombi yam, ewe. Ndicinga ukuba uTolkien undenze i-geek.
I-EGP: Xa uluthanda uncwadi kunjalo Casi akunakwenzeka ukukhankanya umbhali oyintandokazi kuba phantse wonke umntu unento ayithandayo. Ndiza kucaphula Yiba, omnye one Iintsomi, kuba ndibhenela kuye kakhulu ukuze enze into enamathele kum. Kwaye kuba ndingathanda ukuthandana, nangona ndiyazi ukuba andinako. Kwakhona kwi Ukunyoba, i Oku sele sele Umda, endandiyifunda ndize ndiyifunde kwakhona ukuze ndifunde iSpanish. Kwaye ukuya eValle-Inclán, endinayo kwindawo yam yokulala ngoku.
Phakathi kweembongi, uLuis ECernuda, Ingelosi UGonzález no-Antonio Colinas, ohluke kakhulu, uphakathi kwezintandokazi zam. Masibeke noJoan IMargarite ukuba safa nje. Phakathi kwabo bapapasha ngoku, ngaphandle kokuzimisela ukuphelela, ndiye ndafunda yonke into abayipapashayo UManuel Vilas, uVictor woMthi, U-Lorenzo Silva, UJose Zoilo okanye uSantiago Castellanos, umzekelo.
I-EGP: Umntu ophambili ophambeneyo Imfihlakalo ye-haunted crypt nguEduardo Mendoza. Kubonakala ngathi ayinakoyiswa kwisithethe sobukhoboka baseSpain. Nangona kunokubonakala ngathi bubudenge kuwe, ndicinga ukuba ayisiyo picaresque ayisiyo inoveli yaseSpain.
I-EGP: Ndisemncinci ndandibhala ebusuku, ngoku kusasa. Ngaphambili ndavuka ukuze ndihlaziye ukucinga kwam. Kwaye ezona zimvo zibalaseleyo ziza engqondweni kwishawa. Xa ndiphuma kwishower ndiyazilibala phantse zonke.
I-EGP: Ndinokuyithetha? Ndiyathanda ukubhala ebhedini. Ukuvuka ngelesithandathu, umzekelo, ukuthatha ikofu kunye nekhompyuter ukuyolala kwaye ungaphumi apho de ndibhale amaphepha amabini ubuncinci. Ngelishwa ndinganakho ukuhlawula kuphela ngeempelaveki. Bona Ndayibhala kwiinqwelomoya noololiwe nakwigumbi lokulinda. Ukuhamba ngomsebenzi ukusuka apha ukuya apho.
I-EGP: Imibongo. Andiyombongi, utata nonyana wam, ndingumfundi wemibongo, kwaye ndiwongekile.
I-EGP: Ndigqibile Unyana katata nguVíctor del Arbol kwaye ndiyayincoma. Kwaye ndiqala nge Ungenzi njani nguJenny Odell kunye 1794 ukusuka kuNatt och Dag, ndiza kukuxelela ukuba kanjani. Y Ndibhala inoveli yam elandelayo, ibali eloyikisayo endinethemba lokuyihambisa kumpapashi ngoSeptemba.
AL: Ngaba umzuzu wobunzima esijamelana nawo unzima kuwe okanye unokuhlala nento elungileyo eya kukunceda kumabali alandelayo?
I-EGP: Ndiqinisekile ukuba isibetho siza kuza kuthi sonke esibhala kuwo onke amabali ethu. Umbhali yile nto iphilayo, hayi eyona ibalulekileyo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » Iincwadi » Udliwano-ndlebe » U-Esteban González Pons, umbhali we-Ellas. Udliwanondlebe